people Nepal » पुसमा नै गर्मी ! पुसमा नै गर्मी ! – people Nepal
काठमाडौं,पुस २७, २०७७ अघिल्लो सातासम्म दिउँसो पनि चिसो हुन्थ्यो । शनिबारयता भने सर्वसाधरणले तातो महसुस गर्न थालेका छन् । आइतबार दिउँसोसमेत राजधानीमा धेरेले गर्मी महसुस गरे ।